Wafti katirsan dowladda Puntland oo kormeer waxbarasho ku tagey deegaano katirsan gobolka Sool, kana dhagax dhigey dugsiyo waxbarasho. – Radio Daljir
Seteembar 5, 2012 10:04 b 0
Kala-bayr, Sep 05- Deegaanka? kala-bayr? iyo deegaano kale oo kamid ah gobolka Sool waxaa kormeer waxbarasho? ku tagey wafti ay horkacayeen? wasiirka qorshaynta iyo xirirka caalamiga dowladda Puntland Daa’uud Maxamed Cumar iyo? agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland Maxamed C/wahaab Axmed.
Ujeedadda tagis ee waftigaan ayaa waxaa ay ku saabsanayd hirgalinta goobo waxbarasho oo laga dhagax dhigayay deeganada ay booqdeen ee gobolkaasi iyo u kuur galida kuwa horey ugu yaalay? deegaanadaasi si loogu sameeyo dib uhabayn.
Markii waftigaan ay? gaareen deegaanka kala-bayr iyo kuwa hoos yimaada oo ay kamid yihiin tuulooyinka Dan iyo karin garfood Waxaa si diiran ugusoo dhaweeyay dadyow? isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada, Waxaana deegaanka? kala bayr ay ka dhagax dhigeen labo dugsi oo kamid noqonaya 32 dugsi waxbarasho oo horey wasaaradda waxbarashadu u sheegtay in ay ka hirgalinayso guud ahaan deegaanada puntland.
Caaqil Saleebaan Axmed Mursal oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka kala-bayr ayaa sheegay in uu ku faraxsan dugsiyada cusub deeganka laga hirgalinyo isla markaan ay soo dhawaynayaan waftiga iyo cidkasta oo wax u qabanaysa deegaanka.
Agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada puntland Maxamed C/Wahaab Axmed? ayaa warbaahinta u sheegay in booqashadooda ay tahay? u kuur galid iyo hirgalin dhismo waxbarasho oo laga sameeynayo dhamaan deegaanada Puntland.
Wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee puntland Daa’uud Maxamed Cumar? oo waftiga hogaaminayey ayaa dadka deeganka uga mahad celiyey sida ay u soo dhaween,Waxaana uu sheegay in booqashadaan qayb katahay qorsha wasaarada waxbarashada ee ay ku hormarinayso waxbarashada deeganada laamiga ka durugsan.
Deegaanada Kala-bayr iyo kuwa kale ee hoos yimaada waxaa horey uga jiray? goobo waxbarasho oo wax lagu dhigo, Inkastoo aysan lahayn adeegyo waxbarasho oo dhameystiran, Waxaana waftiga dowladda Puntland uu balan qaaday in ay soo dhameystiridoon agabyada laga maarmaanka u ah goobahaasi si loo tayayeeyo dugsiyada waxbarasho ee ka durugsan waddada laamigaa.
Hay’adda DRC oo maanta mootooyin nooca loo yaqaan Bajaaj ugu deeqday bara-kacayaasha kaamka Hala-bookhad.